यस्तो छ कारण अनलाइन सपिङमा अविश्वास - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ कारण अनलाइन सपिङमा अविश्वास
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि अनलाइन सपिङ गर्ने चलन बढेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि अनलाइन सपिङले उपभोक्ताको खासै विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन । किन त ? कारण धेरै होलान् । तीमध्ये केही खोतल्ने प्रयास गर्दैछु्र विगत केही दिनदेखि फेसबुकमा एउटा फोटोले धेरै चर्चा बटुलेको छ। माथिको यही फोटो हेरेर यो ब्लग लेख्न मन लाग्यो ।
अनलाइन सपिङ्गको वेबसाइट बनाएरै अमेजोन डट कमले गरेको प्रगति त तपाइँले सुन्दै–पढ्दै आउनु भएकै होला । तर, नेपालमा चाहिँ किन फस्टाउन सकिरहेका छैनन् अनलाइन सपिङ ?
प्रत्येक अनलाइन सपिङ्ग साइटमा एकै सामानको भिन्दाभिन्दै मूल्य हुन्छ । त्यो पनि धेरै फरक । आफ्नो मनपरी अंकित मूल्य राखेर धेरै छुट दिएको देखाउने गरेको पाइन्छ । मैले यहाँ एउटा सामानलाई उदाहरणको रुपमा लिएको छु, (K18S Smart Heart Rate Monitor watch) यो घडीको वास्तविक मूल्य कति ?
यही एउटा घडीको अंकित मूल्य २९९९ देखि ७९९९ सम्म राखेर छुट दिएको देखियो । आखिर यसको वास्तविक मूल्य कति ? कहिलेकाहीँ त एउटै साइटमा पनि एउटै सामान बेच्नेहरुले फरक फरक मूल्य राखेको देखिन्छ । पसलमा त अंकित मूल्य राख्ने पनि नियम हुन्छ । के अनलाइन सपिङ्गमा कुनै नियम छैन ?
यो हाम्रो चिरपरिचित हङकङ बजार भनिने भृकुटीमण्डप भन्दा उग्र भएनरु कि के नियम छ जान्नेहरुको उत्तरको प्रतीक्षा गर्दछु । अनलाइन सपिङ्गमा मान्छेको विश्वास नहुने मुख्य कारण मलाई चाहिँ यही लाग्छ । अरु पनि तल लेख्ने कोसिस गरेको छु ।
३) पसलमै गएर मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गरी गरी किन्ने बानी छ। अनलाइन सपिङ्गमा एक मूल्य हुन्छ जहाँ बार्गेनिङ गर्न पाइन्न ।
४) धेरै पहिलादेखि हातैले छामेर सामान किन्ने बानी परेका नेपालीलाई फोटो हेरेर किन्ने बानी लगाउन गाह्रो छ। त्यहाँमाथि यी अनलाइन सपिङवालाहरुले फोटोमा एउटा भिडाउने अर्को समेत गर्छन् ।
५) विदेशमा मानिसहरुसँग समयको अभाव छ। नेपालीहरुसँग जति पनि समय छ । एउटा पसलमा गयो, बार्गेनिङ गर्‍यो, चित्त बुझेन, फेरि अर्को पसल गयो । कसैले त एउटा सामान किन्न २, ३ दिन पनि घुम्ने गर्छन् ।
ट्याग्स: अनलाइन सपिङ